Alternating Current System uye Direct Current System (AC&DC System), China Alternating Current System uye Direct Current System (AC&DC System) Vagadziri, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd
Imba>Products Supplier>Yakazara Seti yeMechanical uye Magetsi Equipments>AC&DC System
1.Iyo DC system mudziyo ine mabasa ekuyera kureba, kusaina kure, kurekodha, zvichingodaro, iyo inogona kuona kusingatarisirwe kushanda uye inokwanisa kusangana neyakajairwa mashandiro uye kuvimbisa kuvhurwa nekuvhara kwekudzivirira relay, otomatiki michina, yakakwira-voltage dunhu. mabreaker, mwenje wetsaona uye komputa isingapindike mumamiriro etsaona. Iyo magetsi inopa DC simba kana kana AC simba rikarasika, AC simba rinopihwa kuburikidza neinoshandura mudziyo.
Yakakodzera nzvimbo dzinoda magetsi emagetsi emagetsi, zviteshi, njanji dzemagetsi, petrochemicals, metallurgy, zviteshi zvekuchinja uye zvivakwa zvakakura, kuitira kuti ive nechokwadi chekushanda kwakachengeteka uye kwakavimbika kwemidziyo.
2. Iyo AC yekugovera magetsi mudziyo wemagetsi echipiri midziyo yakavakirwa pane zvinoenderana ne "Power Plant, Substation Injiniya uye Relay Dziviriro Yekuyedza Instrument Configuration Quota" uye iyo Ministry of Electric Power Indasitiri "Power System Relay Dziviriro uye Safety Automatic Equipment. Anti-accident Matanho". Kusarudzwa kweakakwira-akapwanya madiki emagetsi edunhu anochengetedza ipfupi dunhu uye kuwandisa kwedunhu, inopa yakaringana uye yakavimbika yechipiri magetsi epa-saiti yechipiri midziyo yebasa, uye inopa vimbiso yakavimbika yekuvandudza mhando yebasa rakasiyana uye kuve nechokwadi. kuchengetedzwa kwevashandi nemidziyo.
1.Zvimiro zveDC system mudziyo:
Microcomputer inodzorwa yakakwira frequency switch DC system mudziyo ine yakakwira voltage uye yakatsiga ikozvino, saizi diki, huremu huremu, kunyatsoshanda, kubuda ripple, yakaderera harmonic kukanganisa, yakakwirira degree re automation uye kuvimbika kwakanyanya, uye inogona kuve necadmium Nickel bhatiri, acid. -proof mabhatiri uye valve-regulated lead-acid mabhatiri anogona kuve asina kutarisirwa.
2. Kukura kwekushandiswa kweiyo AC system mudziyo:
(1) Kana iyo yekubuda kwechigadzirwa ichinge yazara, inozodzika yega ikozvino pasina kuwandisa;
(2) Chishandiso chine mabasa echishandiso chekuzviongorora, kukanganisa kuzviongorora, kuzvidzoresa uye kutonga kwakangwara.
(3) Chishandiso chinodzorwa sechizvino sosi panguva yekushanda, uye hapana mukana wekuresonance neiyo impedance system.